पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको आग्रह « News of Nepal
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको आग्रह
५ चैत्र २०७६, बुधबार
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले राष्ट्रलाई एक टेलिभिजनमा गरेको सम्बोधनमा कोभिड–१९ विरुद्धको युद्ध जित्ने जिम्मेवारीका साथ एकताको माग गर्नु भएको छ ।
मङ्गलबार साँझ एक टेलिभिजनमार्फत प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामी जिम्मेवार राष्ट्र हौँ भनेर प्रमाणित गर्न हामीले आफूलाई र अरूलाई रक्षा गर्नु आवश्यक छ । सरकारले यस रोगलाई नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यथासक्य प्रयास गर्नेछ ।”
खानले आफुलाई न्याय गर्न घरमै बसेर, सार्वजनिक सभामा उपस्थित हुनबाट जोगिँदै, अन्य सावधानी अपनाउनेहरू र कोभिड– १९ लक्षण भएमा मात्र मेडिकल जाँचको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न मानिसहरूलाई भन्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मानिसहरुलाई यो रोगको विरूद्ध लड्न चीनबाट सिक्न आग्रह गर्नु भएको र भाइरस फैलाउन नदिने रोकथामको लागि चीनले गरेको सफल प्रयासको प्रशंसा गर्नु भएको छ ।
पाकिस्तान निरन्तर चीनको सम्पर्कमा रहेको खानले बताउनु भएको छ । चीनले पहिले नै पाकिस्तानलाई सहयोग गरिरहेको र तर पाकिस्तानले अझ बढी चीनबाट सिक्नु पर्ने आवश्यक रहेको खानले बताउनु भएको छ ।
पाकिस्तानमा कम्तीमा २३५ जनालाई कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ । कोरोना भाइरसबाट अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको आर्थिक कमिटीले निर्धारण गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ । सरकारले निर्यातकर्ताहरू र नोक्सान भोग्नेहरूलाई सहयोग पु¥याउने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
देशले सबै सार्वजनिक र निजी शैक्षिक संस्थाहरू, विवाहका पार्टी हलहरू, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, सिनेमाघरहरू बन्द गरेको छ, र सबै खेलकुद गतिविधिहरू र आधिकारिक कार्यक्रमहरू रद्द गरेको छ ।
पाकिस्तानले यसको पश्चिमी सीमाबाट ईरान र अफगानिस्तानबाट आउने नागरिकलाई पनि रोकेको बताइएको छ । साथै उक्त नाकाबाट सीमा पार गरी नागरिकलाई बाहिरिन पनि रोकेको बताइएको छ ।
देशले यस रोगका विरुद्ध लड्न विशेष कार्यक्रमका साथ अघि बढेको र केही व्यक्तिको परिचालन गर्नुको साथै देशका सबै नाकाहरुबाट प्रवेशमा कडाई गरेको छ । क्वारान्टाइन केन्द्रहरू पनि स्थापना भइरहेका प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ ।
बाइडेनको शपथ ग्रहण लगत्तैका कार्य योजना बाहिरियो
इन्डोनेसियामा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको
भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड
दुई महिला न्यायाधीशको गोली हानी हत्या
नर्वेमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका २९ जनाको
संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अब निरन्तर सुनुवाइ
कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने..
प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी समितिको बैठक पेरिसडाडामा..
छोरा मारिए, शरीर चिरेर यातना दिइयो..
नेपालमा कोभिड खोप परीक्षण गर्ने तयारी
‘हाँस्दै मलामी र रुँदै जन्ती जाने पात्र’
निर्वाचनको तयारी रोक : प्रचण्ड–नेपाल, किन..
संविधानअनुसार नै संसद् विघटन : प्रधानमन्त्री..
अर्को सरकार नबन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा..
निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलसँग परामर्श
टिम टेनिस नेपालको पहलमा धापाखेलमा बन्यो टेनिस एकेडेमी
आगोले नै निभायो आगो, के हो अग्निरेखा ?
निर्वाचनको तयारी रोक : प्रचण्ड–नेपाल, किन रोक्ने ? निर्वाचनमा जाने हो : नेका
संविधानअनुसार नै संसद् विघटन : प्रधानमन्त्री ओली
अर्को सरकार नबन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन सक्तैन ? : प्रधानन्यायाधीश राणा
पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारणसभा फागुनमा